Ngwa Kalịnda Hera na-amalite iji kwalite ọtụtụ nzukọ mebere
Ngwa Kalịnda App na -ewepụta nkwalite ọtụtụ Virtual Virtual Meetings
Ngwa kalenda ọhụrụ, Hera, na-agbanwe kalenda ka ọ bụrụ isi ọrụ maka ndị ọrụ.
N'ime ego ego tupu mkpụrụ nke Eurazeo (nke dị n'okpuru akara Idinvest n'oge ahụ) na ọtụtụ ndị mmụọ ozi na-etinye ego, Hera welitere $ 465,000 (€ 400,000).
Ọ gara n'ihu isonye na batch Y Combinator's S21 wee bulie mkpụrụ $1.7 nde nke Eurazeo na-edu.
Thibaud Elzière, Alexis Bonillo, John Gabaix, Kyle Parrish, Karthik Puvvada, na Calvin French-Owen so na ndị mmụọ ozi azụmaahịa tinyere ego na Hera, yana itinye ego sitere na Kima Ventures na Notion Capital.
Ohere Edtech nke Africa
Hera malitere dị ka ngwa kalịnda na-elekwasị anya na idetu ihe mana ọ kwalitela onyinye ngwaahịa ya ka o sonye na mmemme Y Combinator.
Ọ na-elekwasị anya ugbu a na ijikwa usoro mmemme maka ndị ọrụ na-arụsi ọrụ ike nwere ọtụtụ nzukọ mebere.
Hera na-enyere ndị ọrụ aka ịhazi nzukọ ngwa ngwa ma kesaa nnweta site na email ma ọ bụ ngwa ozi ọ bụla.
Mmalite ahụ ga-ewulite njikọta na ngwaọrụ ọrụ ndị ọzọ ka i wee nwee ike iwepụta ozi dị mkpa tupu nzukọ wee wepụta ozi mgbe nzukọ gasịrị.
Kedu ihe Hera nwere ike ime?
Hera na-enyere ndị ọrụ ya aka ịhazi nzukọ n'enweghị nsogbu ma na-enyere ndị ọrụ aka ịhọrọ ọtụtụ oghere. Ọ na-ewepụtakwa ederede enyi na enyi gbasara nzukọ ọzọ nke ndị ọrụ nwere ike idetuo na mado n'elu ikpo okwu ọ bụla.
N'ụzọ dị otú ahụ, ndị ọrụ enweghị ike ịmepụta ma ọ bụ pịa njikọ iji chọpụta mgbe nzukọ akwadoro na-esote.
Hera na-enyekwa ndị ọrụ ohere idetu ihe tupu ọmụmụ ihe ka ha ghara ichefu ihe ọ bụla. Ndị ọrụ nwekwara ike ịgbakwunye ndetu ndị ọzọ wee bupu data na ngwa ndetu ọkacha mmasị ha.
Na-ekwu okwu na ikpo okwu nke Bruno Vegreville, CEO, Hera, kwuru "Anyị agaghị abụ usoro njikwa ọrụ, anyị ga-ejikọta na ngwaọrụ ndị ị na-ejibu."
Hera anọwo na beta nzuzo maka ọnwa ole na ole gara aga.
Dị ka akụkụ nke atụmatụ ya ịgbakwunye ụfọdụ akụrụngwa multiplayer n'elu ikpo okwu ya, ọ ga-eme ka atụmatụ ọhụrụ dị ka ikwe ka ndị ọrụ kpọtụrụ ndị ọrụ Hera ndị ọzọ na kalenda ha ma nweta nzaghachi na nzukọ, na nhazi oge dị mma n'etiti ndị ọrụ.